Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela eGrisi! - I-LucidPix
Kulesi sikhala se-blog, sibala izindawo ezingcono kakhulu ongavakashela ngazo eGreece, ngakho-ke qhubeka ufunda uma unentshisekelo kumabhishi amhlophe, izilwandle ezicwebile ze-crystal nokudla okuningi okumnandi!
Ngaphandle kwezimo ezikhona emhlabeni, izeluleko zethu ukuthi ungasindisa leli khasi kumabhukumaka akho bese uligcina njengegqozi lokuthi ngabe liphephe nini ukuhamba. Futhi, hlala uskena ezinye izithombe ezinhle ze-3D usebenzisa iLucidPix.
Inhlokodolobha yaseGrisi ikuvumela ukuba ungene emuva ngesikhathi futhi uhlole umlando wabo wasendulo. I-Athene yindawo enhle yalabo abafuna ukucebisa uhambo lwabo ngokuheha izivakashi okuphakathi nezikhathi ezibalulekile ngesikhathi. The I-Acropolis, enye yezimpawu ezaziwa kakhulu zase-Athene, iqukethe izinsalela zezakhiwo eziningi zasendulo, futhi itholakala ngaphezu kwedolobha. Abahambi nje kuphela ababona lo mlando oyingqophamlando, kodwa futhi bathola umbono omuhle wosuku lwanamuhla lwe-Athene ngezansi.
Isinye seziqhingi ezithandwa kakhulu eGreece, iMykonos kuphela ukundiza kwehora ukusuka e-Athene, futhi yeka umehluko wemizuzu engama-60! Lapho usufika eMykonos, uzokwamukelwa ngokukhanya kwelanga, izakhiwo ezihlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe kanye nogu olungapheli. Yibhekise eParadise Beach (ikubone ku-3D ngezansi!) Ukuze uthole umoya ojabulisayo nomoya omnandi. Uma ufuna enye into ephumuzayo, ungathola imfihlo yokucasha ebhishi. Ngezinto eziningi ongazihlola eMykonos, hlola lesi sihloko.
ISantorini yakhiwa ngamadolobha amaningi amnandi abuka isibhakabhaka namanzi acwebile. Lesi siqhingi sasemandulo siyindawo esebenzayo yentaba-mlilo, empeleni “iziqhingi ezakha iSantorini zaba khona ngenxa umsebenzi omkhulu wentaba-mlilo. ” Lesi siqhingi sikulungele ukuyothenga ukudla okulula, ukudla okwenziwe ngamawele, futhi sinezikhathi eziningi ze-Instagrammable.
Lesi siqhingi samaGrikhi siyindawo ethandwa kakhulu yabahambi phakathi kwabahambi baseBrithani abanesikhathi sokuhamba esiphansi njengamahora angama-3 ukusuka e-UK, ungaphunyula isimo sezulu esibuhlungu saseLondon bese ungena epharadesi elishisayo akukho sikhathi! ICorfu inezindawo eziningi zokungcebeleka ongazikhetha kuzo, nezindawo ezinobungani bomndeni. Ukuthola uhlu olubanzi lokuthi ungahlala kuphi, hlola Isihambi saseMedithera. Ngenkathi ulapho, zama ukuphuma izindlela zasendaweni ezifana I- “Pastitsada” ne- “Sofrito”.
Wake waya kulezi zindawo eGreece? Guqula izithombe zakho zokuhamba zibe yi-3D ngokusebenzisa iLucidPix futhi ungakhohlwa ukusithega ithuba lokufakwa Instagram wethu!
Ungayakha Kanjani i-GIF Nge-LucidPix →← Imibono Yezithombe Zezimbali Zasehlobo ze-3D